China Model: YM25BFN-165Hz ifektri abakhiqizi | Isibonisi Esiphelele
Ukubukwa kwe-FHD kusekelwa ngokukhazimulayo isilinganiso esisheshayo sokuvuselela esingu-165hz ukuqinisekisa ukuthi ukulandelana okuhamba ngokushesha kuvela bushelelezi futhi kunemininingwane eminingi, kukunikeze lowo mkhawulo owengeziwe lapho udlala. Futhi, uma unekhadi lemidwebo le-AMD elihambisanayo, ungasebenzisa ngokunenzuzo ubuchwepheshe be-FreeSync eyakhelwe qapha ukuqeda ukudabuka kwesikrini nokuthungatha lapho udlala. Uzokwazi futhi ukuhambisana nanoma yimaphi amamarathoni amageyimu asebusuku, njengoba umqaphi efaka imodi yesikrini enciphisa ukuvezwa kokukhishwa kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka futhi okusiza ukuvikela ukukhathala kweso.
Iphaneli ye-24.5 "TN ene-1920x1080 FHD Resolution
Isikhathi sokuphendula se-MPRT 0.6ms kanye nesilinganiso sokuvuselela esingu-165Hz
Khombisa i-Port ne-2 x HDMI
Idizayini engenasici iletha umuzwa wokubuka ongcono
Inombolo yesampula yokuhlola:
Izinga lokushisa elifanele:
I-Voltage yokuhlola nobuningi:
Ukuhlanekezelwa okuphelele kwe-harmonic kwe-
uhlelo lokuphakelwa kukagesi:
Isilinganiso Sokulinganiswa Kwe-Luminance Ratio
Ukukhanya okuphezulu kwesimo esikwi-mode:
Ukukhanya okuphezulu kokugqamile kwimodi
Inani eliphakeme lokukhanya
Isilinganiso Sokusetshenziswa Kwamandla
Kumodi (i-HDR), uma ikhona
Imodi yokulinda yenethiwekhi
P kulinganiswa (W)
Ukubuka indawo engaphezulu, A (dm2)
Kungani usebenzisa ama-144Hz noma ama-165Hz Monitors?
Siyini isixazululo kulokhu, ungazibuza? Izinga eliphakeme lokuvuselela. Lokhu kusho ukuthi ukuthenga i-100Hz, 144Hz noma i-165Hz computer monitor. Ukuthuthuka kusuka ku-60Hz kuye ku-100Hz, i-144Hz noma i-165Hz umehluko ophawuleka kakhulu. Kuyinto okumele uzibone yona ngokwakho, futhi awukwazi ukuyenza ngokubuka ividiyo yayo kwisibonisi se-60Hz.
Izinga lokuvuselela elijwayelayo, nokho, ubuchwepheshe obusha bokusika obuya ngokuya buba bukhulu kakhulu. INVIDIA ibiza le G-SYNC, ngenkathi i-AMD iyibiza ngeFreeSync, kepha umqondo oyinhloko uyefana. Isibonisi esine-G-SYNC sizobuza ikhadi lemidwebo ukuthi liletha ngokushesha kanjani amafreyimu, futhi liguqule isilinganiso sokuvuselela ngokufanele. Lokhu kuzosusa ukudwengulwa kwesikrini nganoma yisiphi isilinganiso sefreyimu kuze kufike ezingeni eliphakeme lokuqabula lomqaphi. I-G-SYNC ubuchwepheshe iNVIDIA ekhokhisa imali ephezulu yamalayisense futhi bungangeza amakhulu amadola entengo yokuqapha. I-FreeSync ngakolunye uhlangothi ubuchwepheshe bomthombo ovulekile obuhlinzekwa yi-AMD, futhi bengeza kuphela inani elincane ezindlekweni zokuqapha. Isibonisi Esiphelele sifaka iFreeSync kuzo zonke iziqaphi zethu zemidlalo njengokujwayelekile.
Ngabe kufanele ngithenge i-G-Sync neFreeSync yokuqapha yemidlalo ehambisanayo?
Ama-MPRT 1ms wokuqhubeka nokunciphisa ukunyakaza komoya
Inkululeko Nokuvumelana Nezimo
Ukuxhumeka okudingayo ukuxhuma kumadivayisi owafunayo, kusuka kuma-laptops kuya kuma-soundbar. Futhi nge-75x75 VESA, ungafaka imonitha futhi wakhe indawo yokusebenza yangokwezifiso eyingqayizivele yakho.
Singanikezela nge-1% yezingxenye zokulondoloza (ngaphandle kwephaneli) lesibuko.
Isiqinisekiso se-Perfect Display unyaka ongu-1.
Ngeminye imininingwane yewaranti ngalo mkhiqizo, ungaxhumana nesevisi yethu yamakhasimende.
Langaphambilini Uchungechunge lweWC WC320WE
Olandelayo: Imodeli: JM272QE-144Hz